Maxamed Miski Oo Wareysi Siiyey VOA. - Wargeyska Faafiye
Maxamed Miski Oo Wareysi Siiyey VOA.
Maxamed Cabdulaahi Xasan oo loo yaqaan “Miski” waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada ka badan 20-ka ee Soomaalida ah ee ka tagtay Gobolka Minnesota sannadihii 2007 ilaa 2008-da.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsZika oo cabsi geliyay tartanka Olombigga.Arsenal are at a crossroads – but must stick with Arsene Wenger if he is prepared to go January shopping.Ahlu Sunna oo musharrax u soo taagtay madaxtinimada GalmudugFariinta Abuu Zubayr (Shabaab)Saddex Soomaali ah oo lagu dilay Koonfur Afrika